Sawirro: Sweden oo lagu qabtay shir lagu teegeerayo ciidamada Somalia. - Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Sweden oo lagu qabtay shir lagu teegeerayo ciidamada Somalia.
Sawirro: Sweden oo lagu qabtay shir lagu teegeerayo ciidamada Somalia.
Shir ay iskugu yimaadeen Somalida dagan Sweden gaar ahaan Gobolka Malmo ayaa waxa uu ka dhacay halkaas, kaasi oo looga hadlayay xaalada Soomaaliya iyo sidii loo garab istaagi lahaa Ciidamada iyo Dowlada Somaliya.
Kulankan oo ahaa kii labaad ayaa waxa uu ahaa mid si wanaagsan loo soo agaasimay ayna ka soo Qeyb galeen aqoonyahano dhalinyaro iyo waxgarad halkaas jooga, waxaana lagu soo qaaday sidii loo garab istaagi lahaa Dowlada uu Hogaamiyo Madaxwyne Xasan sheikh.
Shirkan ayaa ahaa shirwaynihii labaad ay iskugu yimaaden Somalida is xilqaantay ee dagan wadanka Sweden gaar ahan Gobolka Skхne, waxaana looga hadlay arimo dhowr ah.
Sidoo kale Soomaalidaa isugu timid shirkaa ayaa ahaa dad is xilqaamay oo maalmihii ugu danbeeyay ka wada hadlayay sidii loo taageerilahaayeen ciidamada Amniga Qaranka Soomaaliyeed .
waxaa farxadi ka muuqatay dadkii halkaas iskugu yimid taageerida Qaranka asaasayaasha u ahaa farxad marka ay dadka isku soo xilqaamay taageerida la wada ay ka kala imanayeen magaaloyooyinka kala duwan iyo wadanka deriska u ah sweden ee Danmark.
Aqoonayaho,Macalimiin,Saraakiil ciidamo hore Dhalinyaro, Haween iyo ururo kala duwan.
waxaa leysku afgartay in amniga qaranka laga taageero dhanka caafimaadka , waxana ugu horeynayo dayac tiridda cisbitaalada dowlada leedahay gaar ahaanna kan ciidamada.
Gudiga waxay aad isku afgarteen baahida ka jirta marka cidanka dhawacman dhiig la,aantaku ku dhacdo oo ay laheen bankiga dhiiga lagu keydiyo ayna mahiim tahay in loo sameeyo cisbitaaladasi.
Gudiga taageerida amniga qaranka oo ah 15ruux shaqadoodu ay noqondoonto in ay furan koonto ay dowlada sweden ka warhayso si loogu aruuriyo dhaqaalo lagu qado qalabka lagu dayac tirilahaa cisbitalka aanu kor ku soo xusnay
Gudigan ayaa kala ah Magacyadooda
sxb xubnihii la doortayna magacyadooda waa sidan.
1 Yusuf Mohamed Gure
2 Xasan Axmed Alisow
3 Khader Xaji Aden
4 Caasho Cumar Geesdir
5 Sahro Abdi Mohamed
6 Alinuur Gulled
7 Awil Mohamed Diirshe
8 Hashim Ali Gabeere
9 Asad Ibrahim
10 Nuur Abdi Maxamuud
11 Liban Abdi Abanur
12 Halimo Maxamed Moallin
13 Amino Ali Rage
14 Mustafe Maxamed Haruun
15 Dahir Hirsi Kobayare
Dhinacxa kale Somalida dagan Sweden ayaa Noqonaya Soomaalidii ugu horeysay oo ka hadla aayaha Ciidamada Qaranka Soomaaliyeed, dhaqalana u Aruuriyaya.